တင်မောင်ထွေး – အာဏာရှင် လီကွမ်ယူဆီက ဘာတွေရနုိုင်သလဲ – MoeMaKa Burmese News & Media
(မိုးမခ) ဧပြီ ၂၊ ၂၀၁၅
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ လေဘာပါတီမှာ အာဏာရလာတဲ့ တိုနီဘလဲ၊ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရဖို့အတွက် အကြံဥာဏ်ကောင်းတွေလိုအပ်နေတယ်။ တိုနီဘလဲက အဲဒီအကြံဥာဏ်ကောင်းတွေကို လီကွမ်ယူဆီကနေ ရယူခဲ့တယ်။ ဗြိတိသျှလို ကမ္ဘာ့စံပြ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်ဖို့အတွက် လီကွမ်ယူဆီမှာ ဘာတွေရှိနေလို့လဲ။ မြန်မာတွေက လီကွမ်ယူဆီက ဘာမှ အတုယူနိုင်စရာ မရှိတော့ဘူးလား?
ခင်ဗျားဘ၀မှာ ဘာအရေးအကြီးဆုံးလဲ၊ ဒါကအမေးပါ။
လီကွမ်ယူက ထုံးစံအတိုင်း ဦးနှောက်ကို အလုပ်ပေးပြီး ဖြေးညင်းစွာ အဖြေပေးခဲ့တာက ‘ကျုပ်မိသားစုနဲ့ ကျုပ်ရဲ့တိုင်းပြည် က ကျုပ်ဘ၀မှာ အရေးအကြီးဆုံးပါပဲ’ တဲ့။ ‘ကျုပ်မိသားစု’ (My family) ကို အလျင်ဖြေပြီးမှသာ တိုင်းပြည်ဆိုတာကို ပြောပါတယ်။ ရှေ့နောက်အစီအစဉ်ထားမှုဟာ သာမာန်ကာလျှံကာ မဟုတ်ပါ။ ဒီတော့ အဲဒီအချက်ကရော အတုယူစရာဟုတ်လား၊ မဟုတ်ဘူးလား? စဉ်းစားကြရမယ်။
လီကွမ်ယူက ဗီယက်နမ်ကွန်မြူနစ်ရန်က လုံခြုံဖို့ မဟာဗျူဟာ နှစ်ရပ်ချမှတ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီထဲကတစ်ခုက အာဆီယံခေါ် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအဖွဲ့ကို အင်အားကြီးလာအောင်လုပ်ပြီး ဗီယက်နမ်ရဲ့ ကွန်မြူနစ် ပေါ်လစီကို တွန်းလှန်ဖို့ပဲ။ လီကွမ်ယူက အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေများလာဖို့ ကြိုးစားခဲ့သလို တနည်းဆိုရရင် သူ့နိုင်ငံမှာ ကွန်မြူနစ်တွေတိုးတက်အာဏာရမလာစေဖို့ အာဆီယံကို အသုံးချခဲ့တယ်။ သူ့နိုင်ငံကောင်းစားရေးအတွက် ဘာမဆိုလုပ်ခဲ့တယ်။ ဘာကိုမှ ချွင်းချက်မထားဘဲ တင်းကြပ်တဲ့စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ ကိုင်တွယ်ပြီး ဇီးရိုးကနေ ဟီးရိုးဖြစ်အောင်လုပ်ပြသွားတယ်။ သူ့မှာ အငြင်းပွားဖွယ် အတွေးအခေါ်တွေ ရှိနေတာအမှန်ပဲ၊ သို့သော် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံအနေနဲ့ သူ့ဆီက အတုယူစရာတွေ တပုံတပင်ရှိနေတုန်းပါပဲ။ ဘာကြောင့်လဲ၊ ရှင်းပါတယ်။ သူက အလုပ်နဲ့ သက်သေပြသွားခဲ့ပြီလေ။
၁။ လီကွမ်ယူရဲ့ စင်ကာပူအတွက် ရည်စူးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှုရလဒ်တွေပေါ့ ၊ အဲဒါတွေကို အခြေခံပြီး သူ့ရဲ့ အာဏာရှင်ဆန်မှုကို လျော်ကန်သင့်မြတ်တယ်လို့ ကာကွယ်ငြင်းဆိုနိုင်ပါ့မလား။ ဒီအမေးကို အင်္ဂလန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတိုနီဘလဲကို မေးတဲ့အခါ သူက အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
” ကွဲပြားတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေကနေ လေ့လာသင်ယူနိုင်တာတွေရှိသလို အတုယူလို့မရနိုင် တာတွေလည်းရှိတယ်။ ဒီမိုကရေစီစနစ် ဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်တဲ့ အနောက်တိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုမှာ စင်ကာပူလို စနစ်မျိုး ဘယ်တော့မှ ကျင့်သုံးနိုင်မယ်မဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် စင်ကာပူဆီကနေ လေ့လာသင်ယူနိုင် တာတွေရှိတုန်းပဲ။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ပေါ့၊ ကျွန်တော်က ခိုင်မာတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုအထိ တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့အတွက် တကယ့်ကို လေးလေးနက်နက် ထောက်ခံအားပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်၊ အဲဒီ ကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ရင် ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတွေထဲမှာ စင်ကာပူလည်း ပါဝင်တယ်။ ဒီကနေ့ စင်ကာပူရဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ လူမှု အသိုင်းအ၀န်းကြီးတစ်ခုလုံး (စနစ်တကျ) အလုပ်လုပ်နေဖို့ဆိုရင် နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေအားလုံး မိမိတို့ကိုယ် မိမိတို့ လုံခြုံမှု ရှိနေပါလားဆိုတာကို ခံစားနားလည်နေရမယ်၊ ဒီအချက်ကို လီကွမ်ယူက သဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ လီကွမ်ယူရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေထဲမှာ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုက တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ လုံခြုံမှုကို (အာမခံပေးထားနိုင်အောင်) လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။
ဒါ့ပြင် ၊ နိုင်ငံရေးမှာတိုးတက်အောင်မြင်နေတဲ့ အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဒီအချက်တခုကိုလည်း နားလည်သဘောပေါက်ကြတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ လီကွမ်ယူက (မတူညီတဲ့) ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့စရိုက်တွေကို ပကတိသုညအခြေအနေကနေ တိုးတက်လာတဲ့အထိ ပေါင်းစည်းစုရုံးပေးတဲ့နေရာမှာ ချံပီယံတစ်ဦးပါပဲ။ တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာ နေထိုင်တဲ့ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများရဲ့ မတူညီတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့စရိုက်တွေက စုစည်းပေးတာမျိုးမရှိဘဲ တစ်ယောက်တစ်ပေါက် ကွဲပြားနေမယ်၊ ဒါဆိုရင် ပြဿနာ ကြီးကြီးမားမားဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကို လီကွမ်ယူက ရှေ့ရေးကို တော်တော်များများကြီးအထိ ကြိုတင်ပြီး ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် မြင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့စရိုက် ကွဲပြားတဲ့ လူတွေကို တိုင်းပြည်အတွင်းမှာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်နိုင်ဖို့ ၊ တစ်ဦးကိုတစ်ဦးလေးစားဖို့နဲ့ အားလုံးကို တန်းတူညီမျှ ဆက်ဆံမှု ထားဖို့ စတာတွေကို လီကွမ်ယူက ထောက်ခံပြောဆိုရုံ သက်သက်မဟုတ်ဘဲ တကယ့်လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တယ်။ ” (1)
၂။ ၁၉၅၉ ဇူလိုင် ၂၁ ရက်၊ အာဏာရ ပါတီဖြစ်လာတဲ့ လီကွမ်ယူရဲ့ people action party (ပီအေပီ)။ လီကွမ်ယူဟာ ကိန်းဗရစ်ခ်ျတက္ကသိုလ်ကြီးမှာ ဥပဒေဘွဲ့ကို ပထမတန်းစား ဂုဏ်ထူးနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ ထူးချွန်သူအလိုက်စီတော့ နောင်ကိန်းဗရစ်ခ်ျမှာ ဥပဒေပရောဖက်ဆာကြီးတွေဖြစ်လာမယ့် ထိပ်တန်းအကျော်အမော်နှစ်ဦးရဲ့ ရှေ့မှာ လီကွမ်ယူနာမည်ရှိခဲ့တယ်။ အာဏာရပါတီကို ခေါင်းဆောင်ပြီး ၀န်ကြီးချုပ်တစ်ယောက်ဘ၀ ပထမဆုံးရောက်လာခဲ့တဲ့ လီကွမ်ယူဟာ အသက် ၃၅ နှစ်သာ ရှိပါသေးတယ်။ Legislative Assembly ခေါ် ဥပဒေပြုလွှတ်တော်မှာ ၀န်ကြီးချုပ်တစ်ယောက်နေနဲ့ ပထမဆုံးမိန့်ခွန်းပေးဖို့ လက်နှစ်ဖက်နောက်ပစ်ပြီး ၀င်လာခဲ့တဲ့ လီကွမ်ယူက သူ့ရဲ့ Stand ခေါ် ရပ်တည်သွားမယ့် ရည်ရွယ်ချက်ကို ပြတ်ပြတ်သားသားကြီး ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ မိန့်ခွန်းရဲ့ အနှစ်ချုပ်က “Vow to cleanse the system of the evils of the past” ၊ “အတိတ်က စနစ်ဆိုးကို ရှင်းလင်းသုတ်သင်ဖို့အတွက် သန္နိဌာန်” ပါပဲ။ စင်ကာပူကို မြေလှန်ပစ်ဖို့အတွက် ပြတ်သားရဲရင့်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အတူ သူတို့ (ပီအေပီ) ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကို နောင်ငါးနှစ်သက်တမ်းအတွင်း မှတ်ကျောက်တင် ဖို့ပါ စိန်ခေါ်ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ (2)
မှတ်သားရမှာက “Vow to cleanse the system of the evils of the past” ၊ “အတိတ်က စနစ်ဆိုးကို ရှင်းလင်းသုတ်သင်ဖို့အတွက် သန္နိဌာန်” ။
၃။ ၁၉၆၂ ဇွန်လ ၁၄ ရက်၊ civil servant ခေါ် အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေကို လီကွမ်ယူပြောခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်း၊ “ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အချင်းမှသည် ပြောင်းလဲမှုဆီသို့ ” ။ နိုင်ငံရေးနဲ့ ခေါင်းဆောင်မှု အရည်အသွေးဆိုတဲ့ ကဏ္ဍနှစ်ခုနဲ့ပတ်သတ်ပြီး လီကွမ်ယူက သူ့ရဲ့အမြင်ကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ “နိုင်ငံရေးဆိုတာ ခေါင်းဆောင်မှုပဲ၊ အချုပ်အခြာအာဏာကို ခိုင်မြဲအောင်လုပ်ပြီးတော့ လူတွေကို ရှေ့ကိုချီတက်နိုင်ဖို့ လက်တွဲကူညီရမယ်၊ သူတို့ရဲ့ ဘ၀လမ်းကြောင်းကို တိုးတက်စေဖို့ ပြုလုပ်ပေးရမယ်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ ခြေလှမ်းစပြီးလှမ်းနေတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး နိုင်ငံဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ အချက်သုံးချက်လိုတယ်။ သန္နိဌာန်ချပြီး အဲဒီအပေါ်မှာ အလျော့မပေးတဲ့ဇွဲနဲ့ ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်တတ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အချင်း ၊ အဲဒီအရည်အချင်းကတိုင်းပြည်ကို ရွေ့အောင် ရွှေ့နိုင်ပြီး အခွင့်အာဏာကို လက်တွေ့အသုံးချနိုင်တဲ့အထိသော်လည်းကောင်း ၊ ထိရောက်တဲ့ ကွပ်ကွဲမှုနဲ့ လူတွေအကြား စည်းကမ်းသေ၀ပ်မှု ရှိလာတဲ့အချိန်အထိ အစိုးရတစ်ရပ်အနေနဲ့ ရပ်တည်နေရမယ်။ ” (3)
ဒါက လီကွမ်ယူရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အချင်းကို မြင်တဲ့အမြင်။ ၁၉၆၆ ခုနှစ်မှာ စင်ကာပူအမျိုးသားအဓိဌာန် (Singapore National Pledge) ကို လီကွမ်ယူက တည်းဖြတ်ပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီထဲမှာ “to buildademocratic society, based on justice and equality” ၊ “တရားမျှတ၊ သာတူညီမျှရှိတဲ့ ဒီမိုကရေစီ အသိုက်အ၀န်းကို တည်ဆောက်ရန်” ဆိုတဲ့အချက်ပါဝင်တယ်။ လီကွမ်ယူဟာ ဒီမိုကရေစီကို ဗန်းပြပြီး ဒီမိုကရေစီအခြေခံ စင်ကာပူစတိုင် အုပ်ချုပ်ရေးကို စတင်ခဲ့တယ်။ လီကွမ်ယူရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးအတတ်ပညာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး တိုနီဘလဲက အခုလို မှတ်ချက်ပြုခဲ့တယ်။
“အုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာ အတွေးအခေါ် ဒဿနသက်သက်မဟုတ်ဘဲ လိုချင်တာကို ပုံသွင်းယူပြီး ရလဒ်ထွက်အောင် လုပ်ယူရတဲ့ စွမ်းအားဆိုတာကို သဘောပေါက်နားလည်ခဲ့တဲ့ သူတွေထဲမှာ လီကွမ်ယူဟာ ၂၀ ရာစုနှောင်းပိုင်းကာလအတွက် ပထမဆုံးခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်တယ်။” (1)
လီကွမ်ယူတီထွင်ခဲ့တဲ့ စင်ကာပူစတိုင် ဒီမိုကရေစီဟာ freedom of choice ခေါ် လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့် ၊ freedom of expression ခေါ် လွတ်လပ်စွာဖော်ပြပိုင်ခွင့်စတာတွေကို ဗန်းပြထားပြီး အာဏာရှင်ဆန်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးသာဖြစ်တယ်လို့ ဝေဖန်ခံခဲ့ရတယ်။ ဒီတော့ လီကွမ်ယူရဲ့ ဒီမိုကရေစီကဘာလဲ၊ သူက ဒီမိုကရေစီကို ဘယ်လို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်သလဲ။
“ဒီမိုကရေစီလူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းက သူ့ဟာသူ အော်တိုလည်ပတ်နေတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းမဟုတ်ဘူး။ ဒီမိုကရေစီအောင်မြင်ဖို့ လိုအပ်ချက်နှစ်ခုရှိတယ်။ ပထမတစ်ချက်က တိုင်းပြည်ကို စီမံခန့်ခွဲတတ်တဲ့ နိုင်ငံရေးသမားခေါင်းဆောင်တွေ ရွေးဖို့အတွက် ‘ စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ကြောင့်ကြစိတ်ထားတတ်ရုံသာမက နိုးကြားတက်ကြွ မျက်စိဖွင့်နားစွင့်ထားတဲ့ မဲဆန္ဒရှင် ’ တွေ လိုအပ်တယ်၊ တခါ အဲဒီ (မဲဆန္ဒရှင်) လူထုအမြင်ကို အင်အားအဖြစ် အသုံးချပြီး ရွေးကောက်ထားတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေကို ထိန်းချုပ်ရမယ်။ ဒုတိယတစ်ချက်က ဒီမိုကရေစီအသိုက်အ၀န်းမှာ ခေါင်းဆောင်ကို အစားထိုးရွေးချယ်နုိုင်ဖို့အတွက် ရိုးသားပြီး လုပ်နိုင်စွမ်းရည်ရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ များများစားစားလိုအပ်တယ်။ ” (4)
ဒီမိုကရေစီကို အခြေပြုစတင်လိုက်ရင် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကြီးဟာ သူ့ဟာသူအလိုအလျောက် လည်ပတ်သွားမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ လီကွမ်ယူတင်ပြခဲ့တယ်။ လီကွမ်ယူက အဲဒီအတွက် မြန်မာ ၊ ပါကစ္စတန် နဲ့ အင်ဒိုနီးရှားတို့ကို ဥပမာပေးခဲ့တယ်။ တနည်းဆိုရရင် လီကွမ်ယူက “မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အခြေပြု စတင်တာဟာ တကယ်တန်းလက်တွေ့ကျတဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေမရှိဘဲ မူပြောင်းပြီး ဒီမိုကရေစီကတော့ဖြင့် သူ့ဟာသူ အလိုအလျောက်အလုပ်လုပ်သွားမယ်လို့ မျှော်မှန်းနေကြတယ်” ဆိုပြီး ထောက်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်။
“နိုင်ငံသားတွေဟာ (ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ) သဘောတူထားတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ အထမြောက်အောင်မြင်ဖို့ သူတို့ရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကို အထောက်အပံ့ပေးရန် အင်အားရှိရမယ်၊ စည်းကမ်းကို သဘောတူလိုက်နာရမယ်၊ လိုအပ်တဲ့အခါမှာ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံတာတွေ လုပ်ရမယ်။ အင်အားနည်းမယ်၊ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှု နည်းမယ်ဆိုရင် စီးပွားရေးတိုးတက်မှုလည်း နည်းမှာပဲ။ လူမှုရေးစည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာဖို့ ပျက်ကွက်မယ်၊ ကိစ္စရပ်တစ်ခုအပေါ်မှာ သဘောတူညီချက်ရအောင် မလုပ်ယူနုိုင်ဘဲ အထွေထွေသဘောကွဲလွဲမှုတွေ များနေမယ်၊ ဒါဆိုရင်တော့ (အစိုးရရဲ့) စွမ်းဆောင်ရည်ကလည်း နည်းမယ်၊ အောင်မြင်မှု ရလဒ်ကလည်း နည်းမယ်။” (5)
(က) သန္နိဌာန်ချပြီး အဲဒီအပေါ်မှာ အလျော့မပေးတဲ့ဇွဲနဲ့ ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်တတ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အချင်းရှိတဲ့ ပါတီ
(ခ) ရိုးသားပြီး လုပ်နိုင်စွမ်းကောင်းတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ များများစားစားကြီးလိုအပ်တယ် ၊
(ဂ) သဘောတူထားတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် (တနည်း) ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ ကတိပေး မဲဆွယ်ထားတာတွေကို ရွေးကောက်ခံရအပြီးမှာ ပြန်လည်ဖြည့်ဆီးပေးမှု။ စင်ကာပူမှာ အရည်အချင်းရှိ အစားထိုးရွေးချယ်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အားစု မရှိဘူး။ အချိန်တန်ရင် လီကွမ်ယူရဲ့ ပီအေပီက နိုင်တယ်။ လူတွေက ပီအေပီကို တစထက်တစ ကြိုက်နှစ်သက်မှု နည်းလာသည့်တိုင် သူတို့မှာ ရွေးချယ်စရာ မရှိဘူး။ သို့သော် ပီအေပီသည် ကတိတည်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ သဘောတူထားတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေကို ‘အတတ်နိုင်ဆုံး’ ဖြည့်ဆီးပေးတယ်။
၄။ ၁၉၈၇ ခုနှစ် ၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၆ ပါလီမန်မှာ ပြောကြားခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်း။ “၀န်ကြီးတွေလည်း စစ်ဆေးမေးမြန်းတာကို ခံရမှာပဲ။ ” အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကို လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ ပါလီမန်မှာ လီကွမ်ယူက ပြတ်ပြတ်သားသားကြေညာခဲ့တယ်။ ၁၉၅၉ မှာ လီကွမ်ယူဟာ CPIB ခေါ် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေ တိုက်ဖျက်ဖို့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့ကို မူလနေရာကနေ ၀န်ကြီးချုပ်ရုံးရှိတဲ့နေရာကို ပြောင်းရွှေ့ရုံးထိုင် စေခဲ့တယ်။ အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေကို အကျင့်ပျက်ခြစားမှုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အပြစ်ရှိရင် ဖမ်းဆီးတယ် ၊ နှစ်ရှည် ထောင်ချတယ်၊ ရှာဖွေတယ် ၊ သက်သေခံတွေအဖြစ် ဆင့်ခေါ်တယ် ၊ ဘဏ်အကောင့်တွေကို စစ်ဆေးတယ် ၊ သံသယဖြစ်ခံရသူနဲ့ သူ့မိသားစုတွေရဲ့ အခွန်းထမ်းမှု စာရင်းဇယားကို စစ်ဆေးတယ်။ (6)
၅) ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာ ၆ ရက်၊ စင်ကာပူနုိုင်ငံ ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား သင်ယူတဲ့ ကျောင်းဖွင့်ပွဲမှာ လီကွမ်ယူက အင်္ဂလိပ်စာ၊ ဘာသာစကားက စင်ကာပူဆက်လက်ရှင်သန်ဖို့ သေချာစေခဲ့တယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
“အင်္ဂလိပ်ကုို အများသုံးဘာသာစကားအနေနဲ့ ရွေးလိုက်တယ်။ အင်္ဂလိပ်စာဟာ သင်ယူ လေ့လာတဲ့နေရာမှာ၊ ဒါမှမဟုတ် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ ၊ ဒါမှမဟုတ် လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ စတာတွေ မှာ အမျိုးအမည်ကွဲတဲ့ လူမျိုးခြားတွေအကြား အခွင့်အရေးတန်းတူထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ ဘုံဘာသာစကားဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာ ဘာသာစကားနှစ်မျိုးပြောဖို့ ပေါ်လစီရှိတယ်၊ အဲဒီပေါ်လစီအတုိုင်းပဲ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားကိုလည်း ထိန်းသိမ်းထားတယ်၊ လူတွေကိုလည်း သူတို့လူမျိုးအလိုက် သက်ဆိုင်တဲ့ မိခင်ဘာသာစကား သင်ယူခွင့်ပေးတယ်။ ဒီတော့ သူတို့မှာ မူဘဘူတအရင်းအမြစ်တွေကလည်း ဆက်လက်တိုးတက်နေဆဲဆိုတာကို ခံစားသိမြင်စေသလို မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု ၊ မိမိကုိုယ်ကို လေးစားမှုတွေလည်း တိုးတက်လာတယ်။ လူမျိုးစုံပြီး ကွဲပြားတဲ့ မိခင်ဘာသာစကားတွေကို ပေါင်းစည်းစုရုံး လုိုက်တဲ့အခါ စင်ကာပူနိုင်ငံကြီး ဆက်လက်တည်တံ့စေဖို့ ခိုင်မာသေချာသွားခဲ့တာပါ။ အင်္ဂလိပ်စာကို မရွေးခဲ့ရင်တော့၊ ကျွန်တော်တို့ နောက်ကောက်ကျ ကျန်ရစ်နေခဲ့မှာပေါ့။ ” (7)
ဒါ့ပြင် လီကွမ်ယူက အင်္ဂလိပ်စကားပြော လူ့အသိုက်အ၀န်းကြောင့် နိုင်ငံတကာက အသိပညာရှင် အတတ်ပညာရှင်တွေကို မြှူဆွယ်ဖို့ လွယ်ကူတဲ့အကြောင်း၊ သူတို့ကလည်း စင်ကာပူမှာ လုပ်ရကိုင်ရ ဆက်ဆံရတာတွေ လွယ်ကူချောမွေ့နေတာကို ခံစားသိရှိသွားစေမယ့်အကြောင်း ပြောခဲ့တယ်။
မှတ်သားရမယ့် အချက်နောက်တစ်ခုကို လီကွမ်ယူက ဆိုပြန်တယ်။ “ငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးတွေကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသုံးပြီး ပညာသင်ကြားနိုင်စေဖို့ အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့ နယ်ပယ်အတွင်း တုိုင်းပြည်တော်တော်များများက နားလည်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ language policy ခေါ် စကားပြောဓလေ့ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်က ဆယ်စုနှစ်များစွာ ကြာလိမ့်မယ်။” (7)
၆။ ‘အစ္စလာမ်မစ်အကြမ်းဖက်’။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်လို့ မြန်မာလူထုက လီကွမ်ယူသည် အစ္စလာမ်သာသနာ နဲ့ အစ္စလာမ်မစ်အစွန်းရောက်ကို ကွဲပြားစွာ ဖော်ထုတ်သူမဟုတ်ဘဲ အဲဒီနှစ်ခု အတူတူပဲလို့ ဒိုးဒိုးဒေါက်ဒေါက် ထောက်ပြထားသူလို့ နားလည်ကောင်း နားလည်ထားကြလိမ့်မယ်။ အဲဒီလိုသာ သိထားတာပါဆိုရင်တော့ ဒါဟာ တကယ့်မှားယွင်းမှုကြီးပဲ။ အခု လီကွမ်ယူအဆိုတွေကို ကြည့်ကြမယ်။
“ကွန်မြူနစ်ဝါဒနဲ့ ဒီမိုကရေစီဝါဒ ဒါမှမဟုတ် အရှေ့တိုင်းနဲ့ အနောက်တိုင်း။ အဲသလို ကွဲပြားမှု မရှိတော့ဘဲ အမေရိကန် ၊ အစ္စရေးနဲ့သူတို့ကို ထောက်ခံတဲ့ နိုင်ငံတွေက တဖက် ၊ မွတ်စလင်အကြမ်းဖက်က တဘက် ဒါမျိုးဖြစ်နေပြီ။ စစ်သွေးကြွမွတ်စလင်အုပ်စုနဲ့ ခေတ်နဲ့ ညီပြီး စစ်အရိပ်အယောင်တွေကင်းတဲ့ မွတ်စလင်အုပ်စု ၊ (သူတို့နှစ်အုပ်စုရဲ့ တုိုက်ပွဲ) ကို ဒုတိယစစ်မြေပြင်လို့ ဆိုရမယ်။” (8)
“အစ္စလာမ်မစ် အကြမ်းဖက်ဝါဒကို မွတ်စလင်တွေကသာ အောင်မြင်စွာ ဖြိုခွင်းနိုင်မယ်။” (9)
“မွတ်စလင် (အစွန်းရောက်အတွေးအခေါ်မရှိသည့် မွတ်စလင်များနှင့် ခေတ်မီသည့်အတွေးအခေါ်များဖြင့် ဘ၀လမ်းကြောင်းနေသည့် မွတ်စလင်များ) တွေကိုယ်တိုင်ကပဲ နှလုံးသားထဲက အယူသည်းဝါဒကို တိုက်ခိုက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ အစ္စလာမ်မစ်အတွေးအခေါ်တွေကို မှားယွင်းဖောက်ပြန်စွာ အနက်ဖွင့်ကြတယ်၊ အဲဒီလို အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမှုပေါ်မှာ အခြေခံတဲ့ အကြမ်းဖက်အတွေးအခေါ်ကို သာမာန်မွတ်စလင် တွေက ဆန့်ကျင်ရမယ်၊ တန်ပြန်ရင်ဆိုင်ရမယ်။ ” (9)
“ဂျမားအစ္စလာမီးယားပါတီလိုမျိုး အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်တွေအကြောင်း ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဖူးတယ်။ ဂျီဟတ်ဝါဒီတရားဟောဆရာတွေက မှားယွင်းတဲ့အတွေးအခေါ်တွေ သူတို့ ခေါင်းထဲရိုက်သွင်းခဲ့တာပဲ။ သူတို့က သူတို့နဲ့ အမြင်သဘော တသတ်မတ်ထဲမထားနိုင်သူအားလုံးကို နှိပ်ကွပ်မှာပဲ။ အဲဒီတော့ သူတို့အစ္စလာမ်ဗားရှင်းက ဖောက်ပြန်တဲ့ဗားရှင်းဖြစ်နေပြီ။ ဒီလိုမျိုးဗားရှင်းကို စင်ကာပူက မွတ်စလင်အရေအတွက် အများစုက လက်ခံနောက်လိုက်နေကြတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ (စင်ကာပူ) က မွတ်စလင်ခေါင်းဆောင်တွေက ချင့်ချိန်နိုင်စွမ်းရှိကြသူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်ထောက်ပြခဲ့ဖူးတယ်။ အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်ဝါဒကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် အဆုံးစွန်သော အန္တိမနည်းလမ်းအဖြေက ‘ အစွန်းမရောက်တဲ့မွတ်စလင်တွေကို အင်အားကောင်းလာအောင် အားပေးထောက်ကူရမယ်၊ သူတို့သာသနာ (အစ္စလာမ်ကို) မောင်ပိုင်စီးပြီး အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်တွေအတွက် လူသူအင်အားစုဆောင်းနေတဲ့ အစွန်းရောက်သူတွေကို ဆန့်ကျင်ပြောဆို ဝေဖန်တာတွေလုပ်နိုင်အောင် ၊ ရှေ့ကို ထွက်လာနုိုင်ဖို့အတွက် ရဲဆေးတင်ပေးရမယ်။’ (10)
“မွတ်စလင်ရာခိုင်နှုန်းအများစုက အကြမ်းဖက် ဒါမှမဟုတ် အစွန်းရောက်ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သတ် စပ်ယှက်နေတာမျိုး လုံးဝမရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် လက်နက်ကိုင် အကြမ်းဖက်တွေက အစ္စလာမ်ကို တွန်းအားတစ်ရပ်ဖြစ်လာစေဖို့ မောင်ပိုင်စီးတယ်၊ ပြီးတော့မှ ပြင်းထန်တဲ့ လှည့်ကွက်တွေနဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာကို တန်ဆာ ဆင်တော့တယ်။” (11)
ဇူလိုင် ၂၀၀၅ တုန်းက လီကွမ်ယူနဲ့ ဟီလာရီကလင်တန်တို့ တွေ့ဆုံခဲ့ကြတယ်၊ အဲဒီမှာ လီကွမ်ယူက အစ္စလာမ်ဘာသာကို ရည်ညွှန်းပြီး အဆိပ်အတောက်အယူဝါဒ (venomous religion) ရယ်လို့ ကင်ပွန်းတပ်ခဲ့ကြောင်း ၀ီကီလိခ်က ဖော်ပြတယ်။ ဒါကိုနောက်ပိုင်းမှာ လီကွမ်ယူက တရားဝင်ငြင်းပယ်ပြီး စာတမ်းတစ်ခုထုတ်ကာ ဖြေရှင်းခဲ့တယ်။ အဲဒီဖြေရှင်းမှုကို စင်ကာပူရုပ်သံ MediaCorp က သတင်းအဖြစ် ထုတ်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်။ (12)
အဲဒီလိုပဲ ၊ မလေးလူမျိုးတွေနဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဟာ တသီးပုဂ္ဂလဆန်ပြီး စင်ကာပူအသိုင်းအ၀န်းအတွက် ပေါင်းစည်းဖို့် အခက်ခဲဆုံးဖြစ်တယ်လို့ လီကွမ်ယူက သူ့ရဲ့ “Hard Truths to keep Singapore going” ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာ မှတ်ချက်ပေးဖော်ပြခဲ့တယ်။ ဒါကို နောက်ပိုင်းမှာ လီကွမ်ယူက “I stand corrected” ဆိုတဲ့ စာတမ်းထုတ်ပြီး သူ့အဆိုကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်။ (13)
ဒီအချက်တွေကို မြန်မာပရိသတ်တွေထဲမှာ သိထားသူ မရှိသလောက်ပဲ။
လီကွမ်ယူရဲ့ အဆို်မှာ သတိပြုမှတ်သားနိုင်တာက အစ္စလာမ်မစ်အစွန်းရောက်ကုို ချေမှုန်းဖို့အတွက် အစွန်းမရောက်တဲ့ မွတ်စလင်တွေရဲ့အင်အားကို အသုံးအချရမယ်၊ ဒီတော့ အစွန်းမရောက်တဲ့ အလယ်အလတ်ဝါဒီ မွတ်စလင်တွေကို ပွဲထုတ်ရမယ်၊ အစွန်းရောက်ဝါဒနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး သူတို့ကို ဟောပြောတင်ပြခုိုင်းရမယ်။ ဒီအချက်တွေက မှတ်သားစရာတွေပါပဲ။
လီကွမ်ယူဆီက ဘာတွေရနိုင်သလဲဆိုတဲ့ ယခုစာတမ်းကို အင်္ဂလိပ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း တိုနီဘလဲနဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ရဲ့မှတ်ချက်များနဲ့ အဆုံးသတ်လိုပါတယ်။
“စင်ကာပူက ကျွန်တော်တို့ကို ဒီမိုကရေစီလဲမသင်ပေးဘူး၊ ဒီမိုကရေစီမဟုတ်တဲ့ နည်းလမ်းကိုလဲ မသင်ပေးဘူးလို့ဘဲ ကျွန်တော် ထင်တယ်။ ကွဲပြားတဲ့နိုင်ငံတွေအလိုက် စနစ်မျိုးစုံရှိမှာပဲ။ စင်ကာပူက ကျွန်တော်တို့ကို အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အသွေးနဲ့ နုိုင်ငံနဲ့ချီပြီး ချမှတ်ရတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရဲ့ အရည်အသွေး ၊ အဲဒါတွေကို သင်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ … စင်ကာပူကပေးတဲ့သင်္ခန်းစာက အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကင်းပြီး ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ နိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်ပါ၊ လက်တွေ့ကျပြီး လက်ဆုပ်လက်ကိုင် သက်သေပြနိုင်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးကို ချမှတ်ပါ၊ အဲဒါတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ (တိုနီဘလဲ)” (1)
ဖော်ပြပါအချက်အလက်တွေက အာဏာရှင် လီကွမ်ယူဆီက အတုယူနိုင်ပြီလို့ ယတိပြတ်သတ်မှတ်လိုက်ရမယ့် အချက်တွေလား? မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီလိုဆိုပါတယ်။
“မစ္စတာလီက လူတော်တစ်ယောက်ပဲ။ ဒါပေမယ့် သူလည်း အမြဲတမ်းတော့ ဘယ်မှန်ပါ့မလဲ။” (14)
“စင်ကာပူမှာအောင်မြင်နေတဲ့ စနစ်တွေကို ကျမအများကြီးလေ့လာချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမတို့နုိုင်ငံအတွက် ဒီထက်ပိုပြီး လိုအပ်နေတာမျိုးတွေ ရှိသေးသလားဆိုတာကိုတော့ ကျမဆင်ခြင်မိတယ်။ … တကယ်တော့ စင်ကာပူကလည်း ကျမတို့ဆီက သက်သောင့်သက်သာရှိတဲ့ ဘ၀လမ်းကြောင်းမှုပုံစံကို လေ့လာနုိုင်သေးတာပဲ။” (14)
3) Lee Kuan Yew, speech given to Singaporean civil servants at the Political Center, Singapore, June 4, 1962.
4) Lee Kuan Yew, speech given at an election rally at City Council, Singapore. December 20, 1957
5) Lee Kuan Yew, speech given at the swearing-in of the Singaporean Cabinet, Singapore. January 2, 1985.
8) Lee Kuan Yew – The Grand Master’s Insights on China, the United States, and the World. ISBN 978-0-262-01912-5 , Chapter5– The Future of Islamic Extremism, Pg 68
9) နံပါတ် ၈ တွင် ညွှန်းပြီးစာအုပ်၊ စာမျက်နှာ ၇၆
10) နံပါတ် ၈ တွင် ညွှန်းပြီးစာအုပ်၊ စာမျက်နှာ ၇၆ – ၇၇
11) နံပါတ် ၈ တွင် ညွှန်းပြီးစာအုပ်၊ စာမျက်နှာ ၇၇
Photo credit – http://si.wsj.net/public/resources/images/BN-HN696_0322LK_M_20150322225828.jpg
← ဖိုးထက် – သုခုမ လမ်းပေါ်က ဒုက္ခနိုင်ငံသား
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ – Window Dressing လွှတ်တော် →
ဖေသက်နီ – ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု ဘာသာတရားတွေ ပျောက်ကွယ်သွားလေတော့မလား
One thought on “တင်မောင်ထွေး – အာဏာရှင် လီကွမ်ယူဆီက ဘာတွေရနုိုင်သလဲ”
ko metta says:
လီကွမ်းယူ – ပညာတတ်၊ စီးပွားလုပ်တတ် သူများကိုနေရာပေးပြီး နိုင်ငံထူထောင်ပါတယ်။
လီကွမ်းယူ – လောင်းကစားမလုပ်ပါ။
လီကွမ်းယူ – လာပေး၊ လက်ဆောင်ပေးတွေ လုံးဝမလုပ်ပါ။ လခပဲပေးပါတယ်။
လီကွမ်းယူ – မိန်မ မလိုက်စားပါ။
လီကွမ်းယူ – စစ်မှန်တဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များကို မြှင့်တင်ပါတယ်။
လီကွမ်းယူ – လူတော်လူကောင်းတွေကို ရွေးချယ်ခေါင်းဆောင်လုပ်စေပါတယ်။ ဝင်စွတ်မှုနည်းပါတယ်။
အဲ… လီကွမ်းယူ – သူ့နေရာယူနိုင်တဲ့ အတိုက်ခံများကိုတော့ အပြင်းအထန်နည်းမျိုးစုံနဲ့ အပြက်နှိမ်နင်းပစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံး.. လီကွမ်းယူ သူ့မိသားစု၊ သူ့နိုင်ငံသားတွေကို သိပ်ချစ်မြတ်နိုးပါတယ်။ His Love to Family & People…
သူလိုလုပ်နိုင်တဲ့ ပြက်သားတဲ့ ဖခင်တစ်ဦးဟာ ဒီအတိုင်းလုပ်ရင် ၁၀နှစ်လောက်ဆို အောင်မြင်တဲ့မိသားစုဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။